Fiangonana Shine “Vavaka ihany no hanavotra ny firenena”
FFKM Ny Filohan’ny FJKM no hitarika azy
Fotoan-dehibe ho an’ny fiangonana sy mpino FJKM ny alahady 20 janoary 2019 ho avy izao, hisian’ny fihaonana sy fotoam-pivavahana goavana eny amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Hitondrana am-bavaka ny taona 2019 izy io.
Antoko mpihira AFATRA Hitondra ny « Akon’ny lanitra »
« Akon'ny Lanitra » indray no entin'ny Antoko Mpihiran'ny Tranovato Ambatonakanga, AFATRA, ankalazana ny fetin'ny Epifania.
Irako Andriamahazosoa Ammi Miantso ny HCC hamoaka ny tena marina
Niarahaba sady nirary soa ny vahoaka Malagasy noho ny nahazoana mpamonjy tamin’ny krismasy 2018 sy noho ny taona vaovao 2019, ny filohan’ny mpiandraikitra foibe Fjkm Irako Andriamahazosoa Ammi, mpitandrina.
Ekar Md Josefa Mahamasina Niarahaba ireo pretra efatra ny fiangonana
Amin’izao fahatongavan’ny taona vaovao 2019 izao, dia faly niarahaba an’ireo pretra efatra mirahalahy mianaka, omaly alahady 6 janoary, ireo mpino katolika ao amin`ny fiangonana Ekar Md Josefa etsy Mahamasina.
Ekar Md Josefa Mahamasina Nankalaza jobily roa sosona
Omaly alahady 30 desambra 2018 dia jobily roa sosona no nankalazaina tao amin`ny Ekar Md Josefa etsy Mahamasina.
Hopitaly Befelatanana Zazalahy kely avokoa ny ankamaroan’ireo teraka tao omaly
Zazalahy kely iray antsoina hoe : Randriamampionona Zo Christiano no teraka tamin’ny 11 ora sy sasany alina saika nitovy tamin’ny daty nahaterahan’ny Mpamonjy tetsy amin’ny hôpitaly Befelatanana ny alin’ny 24 Desambra lasa teo.
Fivondronamben’ny Eveka Katolika Miantso ny fampanjakana ny fahamarinana
Namoaka hafatra lehibe ny Birao maharitry ny Fivondronamben’ny Eveka eo anivon’ny Eglizy Katolika eto Madagasikara manoloana ny raharaham-pirenena omaly.
Amin’ny sabotsy 29 desambra ho avy izao ny fotoana iarahana amin’ny fiangonana Shine etsy amin’ny Dôme Ankorondrano amin’ny 2 ora sy sasany. Tsy misy ny vidim-pidirana ary misy ny lohahevitra izay mitondra ny lohateny hoe “alaivo ny fitahiana ho anao”.
Nofidiana manokana ity fotoana ity noho izao vanimpotoana mamaivay eto amin’ny firenena izao hamahana ireo karazana olana mety hisy na amin’ny isam-batan’olona aza. Fotoana handraisam-pitahiana sy fanasitranana hikasihan’Andriamanitra ny tsirairay io fotoana io hoy ny Pastora Alberto Ramelijaona. Hisy ny fotoam-piderana miavaka hiarahana amin’ny tanoran’ny Shine sy ny Antsa an’i Kristy. Tokony tsy handingana ny taona 2019 intsony ny ady sy ny olana maro samy hafa satria manankarem-pahasoavana ny Tompo ka fotoana fanafahana izao hoy hatrany Pasitera. Nanentana ny Kristianina ihany koa izy hitondra am-bavaka hatrany ny firenena amin’izao fisavorovoroana misy hiandrasana ny voka-pifidianana tena izy izao satria izany ihany no lalam-panavotana ny firenena.